Zviratidzo zvinoratidzira kuderera mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Zviratidzo zvinoratidzira downtrend mumusika wemasheya
Kumwe kwekutya kune chikamu chevashambadzi vadiki nepakati parizvino ndechekuti misika yemari inogona kupinda mune yakajeka downtrend iyo inoisa mari yavo munjodzi. Kune mamwe zviratidzo zvinotyisa pane chiitiko chitsva mumisika yemari inogona kufungidzira kudzikira kwemahosi makuru emasheya kutenderera pasirese. Asi muzviitiko zvakawanda, chokwadi ichi hachiuye sechishamiso uye hazvichakwanise kuita chero chinhu. Kunze kwekunge isu tangofungidzira kurasikirwa mune yekuchengetedza portfolio.
Ichi chiitiko chakaitika pamusoro pemakore uye chinoratidzwa munhoroondo yekudyara nemisika yemari. Mupfungwa iyi, iyo Crac ye29 ?? ndiyo yakaparadza zvakanyanya pamusika wemasheya munhoroondo yeUS stock market, ichifunga nezve kusvika kwepasirese uye nekureba kwenguva yekupedzisira kwayo. Kusvikira pakuti yakapa kumakunozivikanwa se Dambudziko ra1929 inozivikanwawo seKuderera Kukuru uye izvo zvakatungamira zviuru nezviuru zvevatengesi kuti vaparare munguva pfupi yenguva.
Saka kuti usarambe uri munzvimbo dzinonetsekana, tichaenda kukupa mamwe emasaini anogona kugadzirwa mumisika yezvemari nezve kutaridzika kweyezvino zasi kwekudzika kukuru uye kusimba. Saka kuti nenzira iyi, unogona kushandisa akanakisa marongero ku kurerutsa chiitiko ichi chitsva mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha zvekuchengetedzeka kwakanyorwa pamisika yemari.
1 Iko US stock market inotarisira maitiro
2 Kuderera kudzikira pakuvhara
3 Kuumbwa kwedenga
4 Analysis: kuburuka katatu
5 Matipi ekutengesa misika
6 Tekinoroji yekuongorora ine yakakosha
Iko US stock market inotarisira maitiro
Panyaya iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mumazuva ekupedzisira ekutengesa, musika weWall Street urikusungwa nekuvharwa izvo zviri kunetsekana chaizvo nevashandisi vezvitoro, kunyangwe nekurasikirwa kwe kusvika pamapoinzi anodarika chiuru. Kupunzika uku kwakakonzerwa nekutya kwevatengesi izvo zvakaita kuti vabve pamusika nekutya zvakashata hupfumi zvinokonzerwa nekuwedzera kwemitero nemhirizhonga yekutengeserana kweUS neChina.
Kune rimwe divi, kusagadzikana kunoitika zuva rimwe mushure meiyo International Monetary Fund (IMF) yakacheka fungidziro yayo yekukura kwepasirese nekuda kwekunetseka nezvekutengeserana hondo uye kushaya simba mumisika irikubuda. Naizvozvo, hakuzovi nesarudzo asi kunyatsoteerera kune zvinoitika mumusika wekutanga wemari pasi rose. Hazvishamisi kuti, inozivikanwa nekufungidzira maitiro ema stock stocks mune yepasirese neimwe nzira. Zvinogona kupikiswa kuti misika kune rimwe divi reAtlantic ine simba rakakura pamisika yepasi rese yemasheya.
Kuderera kudzikira pakuvhara
Chimwe chiratidzo chinogona kuratidza kuti bearish mamiriro ari kuuya kwatiri mumisika yemari ndiyo iri kureva kuti kudzikira kushoma kunoitwa mumutengo wezvivigiro, zvikamu uye indekisi yemusika wemasheya. Ndiyo yakasimba kwazvo uye yakavimbika chiratidzo kuona kuti isu tiri kutarisana neyakajeka kutengesa zvazvino iyo inogona kutora mutengo wezvikamu zvakadzikira zvakanyanya kupfuura zvavari panguva ino. Iyo yakaderera yazvino yekuona system iyo iri pamusoro pezvose zvakavimbika kwazvo uye isu tinogona kuzviita nekuchengeteka kwakakwana.
Kune rimwe divi, hapana mubvunzo kuti isu tichazoda girafu kuti tifungidzire kuvharwa kwevhiki nevhiki, ino inguva iyo ino yakakosha ongororo sisitimu yemisika yemisika inogona kuongororwa. Kwete chete mukutenga nekutengesa masheya mumusika wemasheya, asi kune vamwe, sevaya vanomiririrwa mbishi zvigadzirwa, chaiwo simbi, mari chaiyo uye chero yehupfumi yemari yakanyorwa pamisika. Ichapa iyo chaiyo poindi iyo pazvinenge zvichidikanwa kuti ibvise zvinzvimbo mune zvemari midziyo yakasarudzwa nevadiki nepakati varimi. Pasina kutya kwekukanganisa kana kusanzwisisika pakuongorora kwako. Unogona kuishandisa uine chivimbo chakazara kubva panguva dzino chaidzo.
Mukati meiyo yekuongorora kwehunyanzvi pane akateedzana manhamba anogona kutipa iyo isinganzwisisike chiratidzo chekuti mutengo wemugove uchadonha muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Pakati pawo ese, pane imwe inonyanya kukosha senge yedenga repiri uye kunyange katatu. Asi izvi zvinorevei chaizvo mumifananidzo? Eya, ese mariri akapetwa katatu uye katatu anowanzo simudzwa mukufungidzira divi mugero Kubuda kwaro kwetsigiro kunopa chinongedzo chebhara. Iwo anonziwo maitiro ekudzosera manhamba, bullish kune bearish. Izvo zvinonyanya kubatsira uye zviri nyore kunzwisisa kune ese marejimari profiles.
Kune rimwe divi, kune chimwe chimiro chekukosha kwakakosha icho chinewo zvirevo izvi. Mune ino kesi iri kuburikidza neanozivikanwa chimiro chefudzi-musoro-bendekete. Mune ino kesi kurasikirwa kwerutsigiro rwemutsara kunounza bearish chinangwa cheakanyanya kusimba. Zvirinani zvakagadziriswa munguva ipfupi nepakati nepakati uye kune rimwe divi zvine kuvimbika kukuru mukuongororwa nekuti hazviwanzo kukanganisa munzira iyo misika yemasheya yakaongororwa muhunyanzvi ichatora.
Analysis: kuburuka katatu
Nezve iyo chati kuongorora imwe yeakanyanya kuumbwa maitatu. Kusvika padanho rekuti ivo varipo mune ese kukosha kweiyo misika yemari uye vanogona kukupa imwe pfungwa nezvekuti kupi kupfura mune dzekudyara iwe wawakagadzirira kubva panguva dzino chaidzo kunogona kusvika. Chero zvazvingaitika, iri kirasi rematatu rinogona kuganhurwa muzvikamu zvakati wandei, kunyangwe iyo yatiri kuzobata nayo inonzi kuburuka nekuda kwezviri pachena zvechirevo.
Huye, iyo katatu inodzika ndiyo iyo inoumbwa netambo yakatwasuka inoshanda senge rutsigiro uye nhungamiro ye bearish, mutengo urikuita mashoma ekudzikira mukati mekatatu. Kana pane chimwe chinhu mhando iyi makona matatu ndeyechimwe chinhu chakareruka sekuti vanowanzo kupaza nguva zhinji. Ivo vanogona kukupa iwe poindi yekuregedzera kuti ubvise zvinzvimbo mumisika yequity uye nenzira iyi iwe uri mune iri nani nzvimbo yekukwirisa mashandiro ako mumusika wemasheya. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi
Matipi ekutengesa misika
Kutenga kwakanaka mumisika yemasheya kunoreva kuenda nenzira refu kuitira kuti mhedzisiro iri muchimiro chemari inowanikwa hautore nguva kusvika. Asi kuti izvi zvinyatsotsanangurwa, hakuzovi nesarudzo kunze kwekutora nhevedzano yemirairidzo uyezve matanho. Nechinangwa chekuti a lousy chinzvimbo kutora inogona kuyera mukudyara kwedu mune ramangwana. Kunyangwe iri pamubhadharo wekusimudzira kumusoro kumusoro kweinowedzera kana kushoma nguva yakareba yenguva.
Usati watora zvinzvimbo mune chengetedzo, zvinokurudzirwa kuti uongorore hunyanzvi uye hwakakosha chimiro. Chero zvazvingaitika, usaisiyire kune yakasarudzika sarudzo iyo inogona chete kuunza matambudziko kune zvido zvevadiki nepakati varimi. Chaizvoizvo nekuti dzinogona kutanga nenzira ye vakaremara izvo zvinodzora kubva kumatengesi akavhurika mumisika yemari. Iri nderimwe remabasa makuru atinofanira kuchengetedza kubva panguva dzino chaidzo uye pamusoro pezvekufunga kwechipiri.
Tekinoroji yekuongorora ine yakakosha
Kupinda munzvimbo dzakakodzera zvakare kunorerutsa basa rekusarudza kana uchivaka portfolio, sezvo zvingangotora pfungwa yakanaka yemusika. Zvisinei nekubheja kwakasarudzwa, chero bedzi data rakakosha remakambani iri rakanaka. Mupfungwa iyi, chiyero chinoshanda chaizvo ndechokubatanidza iyo technical kuongororwa nezvakakosha. Inoshanda chaizvo, sevashambadzi vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari vanogona kuwana.
Kune rimwe divi, hatigone kukanganwa chero nguva tichafanira kukanganwa madhiri atingaite pane imwe nguva kana imwe. Semuenzaniso, chokwadi chekuti zvakajairika kuti varimi vapinde mu stock stock kunze kwekuenderana. Ndokunge, mushure mekunge yakawanda yeiyo bullish yekuumbwa yapedzwa. Iko ingangodaro isisiri yakanyanya kunaka nguva yekupinda mumisika. Naizvozvo kuchazove kumwe kusagadzikana kuchazofanira kugadziriswa kuzadzisa zvinangwa zvakagadzwa nevashambadzi vadiki nepakati.
Tichifunga nezvechiitiko ichi, muridzi wemari anofanira kuenderera mberi aine mirayiridzo yakasimba yekuita kwavo kutenga. Mupfungwa iyi, nhungamiro yakapusa yatichangobva kupa uye iri nyore kwazvo kutevedzera, kunyangwe kune vashoma vane ruzivo, inogona kubatsira zvakanyanya. Nekuti pakupera kwezuva ndezvekuita kuchengetedza kunobatsira pamusoro pezvimwe zvatafunga muchinyorwa chino. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zviratidzo zvinoratidzira downtrend mumusika wemasheya
Ari kubuda: iyo Internet chikamu pamusika wemusika
Ndezvipi zvakagadzirwa zvigadzirwa?